ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၃) - Myanmar Network
ကြားဖူးနားဝ အဆိုစကားများနှင့် ၎င်းတို့၏ အဓိပ္ပါယ်များ (အပိုင်း ၃)
Posted by Language Republic on November 20, 2014 at 17:56 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အပိုင်း (၃) မှာတော့ an axe to grind နှင့် at the end of one's tether တို့၏ အဓိပ္ပါယ်၊ သမိုင်းနှင့် ဥပမာများကို ဖတ်ရှုရမှာပါ။
တိုင်တစ်တိုင်မှာ ချည်ထားတဲ့ မြင်းတစ်ကောင် သို့မဟုတ် နွားတစ်ကောင်ကို မြင်ဖူးကြမှာပါ။ အဲဒီ အချည်အနှောင်ခံထားရတဲ့ တိရစ္ဆ္ဆာန်ဟာ သူ့ကိုချည်ထားတဲ့ tether လို့ခေါ်တဲ့ ကြိုးအရှည် ရှိသလောက်သာ လှုပ်ရှား သွားလာလို့ရမှာပါ။ ကြိုးအဆုံးကို ရောက်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမှ ရှေ့ကို ဆက်သွားလို့ ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ အဲဒီအခါမှာ တော်တော်စိတ်ပျက်ပြီး ဒေါသထွက်နေမှာပေါ့။ ဒီအခြေအနေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီး လူတွေမှာလည်း သည်းခံမှု၊ စိတ်ရှည်မှုတို့ ကုန်ခမ်းပြီး စိတ်မထိမ်းနိုင်အောင် စိတ်ပျက် ဒေါသထွက်ရတဲ့ အခြေအနေ မျိုးဖြစ်လာရင် at the end of one’s tether လို့သုံးနှုန်း ပြောဆိုကြတယ်။
The poor man was clearly at the end of his tether.
She said she can't cope with it anymore as she's at the end of her tether.
"ပုဆိန်သွေးသူ" တွေ ဟာကိုယ့်အကျိုး အတွက်၊ ကိုယ့်အခွင့်သာဖို့အတွက် တစ်ဖက်သားကို မြှောက်ပင့် ပေါင်းသင်းတတ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆိုကလေးဖြစ်ပေါ်လာပုံဟာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အမေရိကန်မှ နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုိလ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Benjamin Franklin ငယ်ရွယ်စဉ် အချိန်က "ပုဆိန်သွေးသူ" တစ်ယောက် ကလှည့်စား ပညာပေးတာခံခဲ့ရဖူးတယ်။ တစ်နေ့မှာ Benjamin ဟာ ပုဆိန်သွေးဖို့ ကျောက်စက် ဆရာတစ်ယောက်ဆီ သွားသတဲ့။ ပုဆိန်သွေးသမား ကျောက်စက် ဆရာက သူ့ကိုကြည့်ကာ သူ့ရဲ့ ခန္ဒာကိုယ် သန်စွမ်းမှုကို ချီးမွှမ်း မြှောက်ပင့်ပြောဆိုပြီး ပုဆိန်သွေးတဲ့ကျောက်စက်ကို လှည့်ခိုင်းသတဲ့။ Benjamin ခမျာ လေးလံလှတဲ့ ကျောက်စက်ကို ပင်ပင် ပမ်းပမ်း လှည့်နေချိန်မှာ ပုဆိန်သွေးသမား ကျောက်စက် ဆရာက သက်သက်သာသာဘဲ ပုဆိန်သွေး နေသတဲ့။ သွေးပြီးခါမှ ပုဆိန်သွေးသမားက Benjamin ရဲ့ ရိုးအမှုကို ဟားတော့မှ Benjamin က သူခံလိုက်ရပြီဆိုတာ သဘောပေါက်တော့တယ်။ အဲဒီအချိန် ကစပြီး Benjamin ဟာသူ့ကို မြှောက်ပင့် ပြောဆိုသူ မှန်သမျှဟာ သူ့ကိုအမြတ်ထုတ်မဲ့ နောက်ထပ် ပုဆိန်သွေးသမား တစ်ယောက် someone with an axe to grind လို့ဘဲမြင်တော့တယ်တဲ့။
Benjamin နောက်ပိုင်း နာမည်ကျော် ပုဂ္ဂိုိလ် တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံရေးသမား Charles Miner က ဒီ saying ကိုသုံးပြီးဘယ်လိုရေးခဲ့သလဲဆိုတော့
"When I seeamerchant over-polite to his customers …thinks I, that man has an axe to grind." တဲ့။
Environmentalists have no political axe to grind - they just want to save the planet.
They are also dependent on informers who, as we journalists know, can sometimes misinform, especially if they have an axe to grind orapolitical goal to pursue.
စာအရေးအသား ပိုသွက်လက်အောင် ရေးပုံရေးနည်း
ပြန်စာတကယ်ရရှိနိုင်မဲ့ e-mail ရေးနိုင်ရန် အကြံပြုချက်များ